फाल्गुण १८, २०७५ | काठमाडाैं
हरेक मानिसको जीवनको असली नायक स्वयं हो । त्यही स्वयंभित्र आफूलाई समयको रफतारमा कुन परिधिभित्र कैद गरेको हुन्छ । त्यसको साक्षी समयसँगै स्वयं हुने गर्छ । तीनै समयको साक्षीको किनारामा जीवनलाई परबाट हेर्दा लाग्ने अनुभूतिको खातलाई धेरैले कृतिको रुपमा प्रकाशन गर्दछ । समय र आफू हुनुको दुरीलाई नाप्दछ र तौलन्छ । त्यस्तै दुरीको अन्तरमा उभिएको छ नेपालजित लामाको आत्मवृतान्त मन्थन । जसलाई घोस्ट राइटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको हो ।
नेपालजित लामा औसत बालक, स्थानीय दादागीरी, लागूपदार्थ दूव्र्यसनी, राजनीतिक कार्यकर्ताहुँदै त्यसैको पृष्ठभूमिमा निर्माण गरेको विशुद्ध छविको नेता र समाजसेवीको लोभलाग्दो हैसियतलाई मन्थनमा पाँचवटा मूलखण्डको विभिन्न उपशीर्षकमा राखेर वर्णन गरेका छन् । जीवन सोचे जस्तो हुँदैन नत देखे जस्तो नै हुन्छ । तर दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने जीवन सोचेभन्दा सुन्दर र देखेभन्दा उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । मन्थनले यही कुराको प्रक्षेपण गर्छ । मन्थनमा पूर्खालाई बेस्सरी सम्झेका छन् । पुर्खाको गुनगान गर्न कतै थाकेको देखिदैन । पूर्खासँगै समुदाय । समुदायसँगै टाँसिएर आएको विरासत भाषा, धर्म, कला र संस्कृतिलाई अनुभवजन्य दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन् । इतिहासको पानामा हराएका पूर्खालाई जोड्न निकै कसरत गरेका छन् । आफू जन्मेको ठाउँ, टोल, वस्ती, फाँटसँग मन्थनमा हरबखत जोडेका छन् ।
विशुद्ध छविको नेता र समाजसेवीको लोभलाग्दो हैसियतलाई मन्थनमा पाँचवटा मूलखण्डको विभिन्न उपशीर्षकमा राखेर वर्णन गरेका छन् ।
रुपान्तरण परिवर्तनको स्वरुप हो । त्यो सकरात्मक हुनुपर्छ । नेपालजितका हकमा सबै परिवर्तनहरु सकरात्मक पनि रहेका छैनन् । त्यसैले त कथाहरु बुनिएका छन् । पहिलो प्रेम । प्रेमपछि बैवाहिक सम्बन्ध । सम्बन्धहरु अघि बढ्दै जाँदा सम्बन्धकै रुपमा नरहने पनि हुन्छन् । अंहमलाई प्रत्ययहरुले साथदिदा सम्बन्धहरु भत्किनका लागि बनेको तीतो यथार्थसँग साक्षात्कार भएको कुरालाई धेरै ठाउँमा उप्काएका छन् । बाजे र बुबाले निर्माण गरेको फराकिलो आँगनमा बामेसार्दै हुर्के बढेकाले वास्तविक भौतिक दुःखको भोगाइ खासै देखिदैन । जति दुःखहरु भोगेका छन् ती सबै समयका दुःखहरु हुन् । दरिलो आर्थिक हैसियत, घरेलु राजनैतिक पृष्ठभूमिको परिवेशमा हुर्केको राजनीतिक चेतले समाजप्रति उत्तरदायी बन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । अन्याय, अत्यचार, शोषण विरुद्ध कतै चुकेको देखिदैन । मानौ स्वाभिमानको लडाइँमा आजसम्म पनि डटिरहेका छन् । सिद्धान्त र नैतिकताको राजनीतिलाई छाडेर गुटबन्दी र आत्मकेन्द्रित स्वार्थको राजनीतिलाई कहिले समर्थन गरेन । त्यसैले पनि होला त्यो फोहोरी अहालमा नबसेर बरु बाहिरै अलग्गै रमाएका छन् । बुबा काँग्रेस छोरा कसरी प्रगतिशील विचारतर्फ उन्मुख भए त्यसको मन्थनमा त्यति खुलेको देखिदैन । राजनीतिक चेतले समाजप्रतिको चासोलाई बुझन सरल बनाएको देखिन्छ । झन प्रतिष्ठित नेताहरुसँगको हिमचिमले उर्जा र उत्साह दुवैले गति पाएको देखिन्छ ।
देशमा आएको २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ परिवेशमा नेपालजितको उर्जाले सही धरातल भेटाउन पुग्छ । जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धी यही अवधिमा प्राप्त गरेको दखिन्छ । उर्जापूर्ण समयलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाएर चारैतिर वाहीवाही बटुल्दै संगठनमा समेत हक्की र सफा छवि कायम गरेको देखिन्छ । कुनै समय जीवन देखि विरक्तिएका एनजित एकाएक समाज विकासको महत्वपूर्ण अग्रणि व्यक्तिको रुपमा दरिन पुग्छ । हामी समय र परिस्थितिको दास भएकोले कुनै ठाउँमा सम्झौता गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो त सम्झौताले नै जीवनलाई अघि बढाउने हो । भयो त्यस्तै नै । एनजितले दोस्रो विवाह गरे । जीवनलाई फेरि हराभरा पारे । धेरै ठाउँमा आफ्नै अघि आफ्नै गुनगानले गौरवम्वित भएको घटनाले उत्साहित भएको देखिन्छ । जीवनमा प्रया घटना, परिघटना र दूर्घटना आकस्मिक रुपमा हुने गर्छ । त्यो आकस्मितामा संयोग पनि जुर्न पुग्छ । त्यस्ता संयोगका धेरै फेरस्तिलाई आत्मवृतान्तमा जोडेका छन् । जसले पाठकलाई उद्धवेलित बनाउँछ । अनि पाठकले पनि आफ्नो जीवनका त्यस्ता संयोगलाई त्यही संयोगको चेपमा स्मरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
भनिन्छ, राजनीतिमा कोही पनि स्यायी शत्रु हुँदैन । गुट र फूटबाटै राजनीतिले पूर्णता पाउँदछ । सिद्धान्तको म्यानुपुलेटिङ अथवा आफू अनुकूल व्याख्याले राजनीतिलाई फोहोरी खेल पनि भनिन्छ । त्यसको असली मन्चन भनौ अभ्यास हाम्रै देशमा भइरहेको छ । त्यसको साक्षी हामी सबै हौं । तर स्वाभिमान र नैतिकताको राजनीति गर्नेहरु त्यो खेलमा अटेनन् । समाजलाई जितेर पनि नेपालजित जस्ता स्पष्ट र निर्भीक अभियन्ता धेरै पटक धरै ठाउँहरुमा हारिरहे । नेपाली राजनीतिको यही नयाँ चरित्रले धेरै रहर लाग्दा आशा गरेका राजनीतिकर्मीहरुको अवसान भएको सत्य हो । गुट र उपगुटको चेपबाट आफूलाई भिन्न देखाउन नसक्नु नेपालजितहरु पनि कम्ता दोषी छैनन् । एक्लैले के गर्न सकिन्छ ? भन्ने निराशावादी चिन्तनबाट माथि उठेर एक्लैले के गर्न सक्दैन ? भन्ने दर्शनलाई अघि बढाउन चुकेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले जीवनमा मानसम्मान र ख्याति त्यति सजिलै हाँसिल गर्न सक्दैन । हाँसिल गरेको ख्यातिलाई कायम गर्न झनै गा¥हो काम हो । जीवनको झनै उर्वर समयलाई एनजितले उपभोग गर्न सकेको देखिदैन । निराशाको पुलिन्दा बोकेर भौतारिरहेको देखिन्छ । सायद निष्क्रियतामा सक्रियता देखाउन होला । यसैको एउटा उपज मन्थन पनि हो जस्तो लाग्छ । झन अब नो पोलटिक्सले एनजितबाट अघिको राजनीतिमा आशा गर्ने ठाउँ साँघुरो देखिन्छ ।
कसैले जीउने जीवन उनका निजी हुन् । निजी जीवनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि नाम र दामले समाजमा कहलिएका व्यक्ति विशेष यसमा बढी अग्रसर देखिन्छ । कतिपया आत्मकथाहरु विवाद र चर्चाको घेरामा नरहेको होइन । यद्यपि ती भोगाइ र व्यक्त भएका विचारहरु वैयत्तिक हुन् । त्यसमा कतिको सत्यता छ त्यसको साक्षी पनि स्वयं हुने हुँदा समीक्षाको आधारहरु नरहन सक्दछ । आत्मकथामा आफूलाई केन्द्रमा राखेर घटनाहरु अघि सार्ने हुँदा कमजोर पक्षहरुलाई कतिपयाले न्याय गर्न सक्दैन । यो आत्मकथाको दोष हो । मन्थनमा पनि कमजोर पक्षको चर्चा नभएकोले दोषमुक्त रहन सकेको छैन ।
हरेक जीवनमा आफ्नै भोगाइका कथाहरु हुन्छन् । भोगाइले जीवनलाई हेर्ने र बुझ्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउँछ । हरेक सफल व्यक्तिहरु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नै सफल भएका छन् । ती व्यक्तिहरुलाई समाज, समुदाय र पूर्खाले सधैँ स्मरण गरिरहन्छ । एनजित लामाको मन्थनमा त्यही कुराको राप देखिन्छ । मन्थनमा गरिएका सिलसिलबद्ध वाक्यहरुले समाजलाई प्रेरित गर्ने थुप्रै अवसरहरु सिर्जना गरेका छन् । मन्थन भित्र समाज छ । समुदाय छ । समुदायभित्र गाँसेको संस्कार छ । इतिहास छ । असन्तुष्टि छ । कतै पश्चाताप, आत्मगौरव र ग्लानि पनि छ । सबैभन्दा ठूलो साहास र हिम्मात छ । एउटा जीवनको कालखण्डको घटना र दूर्घटनासँग अघि बढ्दाको बेग्रल्ती अनुभूतिको खात छ ।